No. 2156, Monday, June 17, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2156, Monday, June 17, 2019
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့် (တနင်္လာ၊ ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၉)
ကိုပါအမေရိက ဖလားဗိုလ်လုပွဲသို့ သုံးကြိမ်ဆက် တက်ရောက်ရေး အာဂျင်တီးနား ၏ ကြိုးပမ်းမှုသည် အုပ်စု (B)အ ဖွင့်ပွဲတွင် ကိုလံဘီယာကို နှစ်ဂိုး ပြတ်ရှုံးနိမ့်မှုဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။
. ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဖြစ်လာမည်ဟု သတင်းထွက်နေသော အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဖရန့်လမ်းပတ်က လက်ရှိကိုင်တွယ်နေသော ဒါဘီကောင်တီအသင်းနှင့် စာချုပ်သက်တမ်း တိုးရေးဆွေးနွေးနေကြောင်း ဘီဘီစီသတင်းက ဖော်ပြသည်။
ပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဂ်ဘာက ၎င်းအနေဖြင့် မန်ယူ မှထွက်ခွာနိုင်ကြောင်း တိုကျိုမြို့ တွင် သတင်းထောက်များအား ပြောကြားသည်။
ယခုလတတိယပတ် တွင်ဘန်ကောက်မြို့၌ ကျင်းပ မည့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအ ဝေးသုို့ နုိုင်ငံတော်၏အတုိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နုိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အဆင့် မြင့်အရာရှိတစ်ဦးကပြောသည်။
လစ်လပ်နေသည့် ပြည် နယ်ဝန်ကြီးနှစ်ဦးနေရာ၌ အစား ထိုးခန့်အပ်ရန် ဇွန်လ ၂၄ ရက်တွင် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ စတင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောချစ်ခင်က ပြောသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးလှသော ရွေးကောက်ပွဲနှစ် နှင့် တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ပြည်သူ များ အထူးသတိပြုရမည့်အချက်နှစ် ချက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိအစိုးရအကျပ်ဆိုက်စေရန် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအသွင် ပဋိပက္ခများ ဖန်တီးမှုများရှိလာနိုင်ခြင်းနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလျော့ ရဲအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးမတည် မငြိမ်ဖြစ်စေရန် ဖန်တီးမှုများ ရှိလာ နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားများသို့ နှစ်လအတွင်း ကွန်ဒိုရောင်းချနိုင်မည်ဟုဆို
အချိုးသင့်ပိုင်ဆိုင်မှု တန်ဖိုးနှင့် နိုင်ငံခြားငွေအ၀င်၊ အ ထွက်စီမံခန့်ခွဲမှုများ ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဆိုပါက ဆောက်ပြီးသား ကွန်ဒိုများကို နှစ်လအတွင်း နိုင်ငံခြားသားများထံ ရောင်းချခွင့်ရရှိ မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးမြင့်က ပြောသည်။
ဂျပန်တစ်ပတ်ရစ်ကားများ အရောင်းအဝယ် လျော့ကျ
ရန်ကုန်ကားဈေးကွက် အတွင်း ဂျပန်တစ်ပတ်ရစ်ကား အရောင်းအဝယ် ပုံမှန်ထက် လျော့နည်းနေကြောင်း မော်တော်ယာဉ် ဝယ်၊ ရောင်းပြုလုပ်သူများနှင့် အရောင်းစင်တာ ဖွင့်လှစ်သူအချို့ ကပြောသည်။
ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ခိုင်မာသည့်တဲအိမ်များ အချိန်မီ ဆောက်လုပ်ပေးရန် လိုအပ်နေ
မိုးရာသီရောက်လာပြီ ဖြစ်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ဘေး ရှောင်စခန်းများတွင် ခိုလှုံနေရ သည့် ဒုက္ခသည်များအတွက် ခိုင်မာသည့် တဲအိမ်များ အရေးပေါ် ဆောက်လုပ်ပေးရန် လိုအပ်နေ ကြောင်း ကူညီရေးအဖွဲ့များနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာစစ်တပ် ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွင် အကြမ်းဖက်သမားများကို ပစ်မှတ်ထား
အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာစစ် တပ်သည် မဏိပူရ၊ နာဂလန်းဒ် နှင့် အာသံပြည်နယ်များတွင် လှုပ် ရှားလည်ပတ်နေသော အကြမ်း ဖက်အဖွဲ့ အမြောက်အမြားကို ပစ်မှတ်ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာနယ် စပ်ဧရိယာများ၌ မေလ ၁၆ ရက်က စတင်ကာသုံးပတ်ကြာ ပူးပေါင်း စစ်ဆင်ရေး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ကာ ကွယ်ရေးရင်းမြစ်များက ဇွန်လ ၁၆ ရက်တွင် ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ငမြှောင်တောင်ပိုးအန္တရာယ်ပိုများလာ၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး ဆေးဖျန်းတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ပြောင်း စိုက်ခင်းအချို့တွင် ဖျက်အားပြင်း ငမြှောင်တောင်ပိုးကျရောက်မှု ပို မိုဆိုးရွားလာပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် စစ်ဆင်ရေးပုံစံဖြင့် တိုက်ဖျက် နေရသည်ဟု ရှမ်းပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး ဦး တင်ဦးကြိုင်ကပြောသည်။
ကိုရင်တစ်ပါးကို ချုပ်နှောင်ကွယ်ဝှက် သူနှစ်ဦးအားအမှုဖွင့်
ဇီးကုန်းမြို့နယ် ရွာပိုင်ကြီး အုပ်စု ရွာပိုင်ကြီးဘုန်းကြီး ကျောင်းတွင် ကိုရင်တစ်ပါးကို သင်္ကန်းစများဖြင့် ချုပ်နှောင်ကွယ် ၀ှက်ထားသူနှစ်ဦးအား အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း ဇီးကုန်း မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးကျော် ကျော်က ပြောသည်။
မောရစ်သျှနိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့် နိုင်ငံတကာကြက်တောင် ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူ ဇာသည် မောရစ်သျှ၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံတို့မှ ကစားသမားတို့ကို ကျော်ဖြတ်၍ အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။
အသစ်ဖောက်လုပ် ထားသည့် ၃၈ လမ်းပိုင်းအသစ်ကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် အောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းဟု အ မည်ပေးရန် စိတ်ကူးထားကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ ရဲလွင်က ပြောသည်။
အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ လက်ခံကျင်းပရန် ထိုင်းအစိုးရ အသင့်ပြင်
လာမည့် သီတင်း ပတ်တွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ ထိုင်းအစိုးရက ဒေသဆိုင်ရာ ခေါင်း ဆောင်များကို ကြိုဆိုရန် အသင့် ပြင်ဆင်နေသည်။
အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်း ၂၈ မျိုးကို အိန္ဒိယက အခွန်တိုးမြှင့်ပြဋ္ဌာန်း
နယူးဒေလီသို့ အဓိကကုန်သွယ်ရေး အခွန်ကင်းလွတ် ခွင့်များကို ဝါရှင်တန်က ရုပ်သိမ်း မှုအပြီးတွင် အိန္ဒိယက လက်တုံ့ပြန်ခြင်းအဖြစ် မက်မွန်စေ့၊ ပန်းသီးနှင့် သစ်ကြားသီးစေ့ အပါအဝင် အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်း ၂၈ မျိုးအပေါ် တနင်္ဂနွေနေ့ကစ၍ အခွန်တိုးမြှင့်ပြဋ္ဌာန်းမည် ဖြစ် သည်။
အင်ဒိုနီးရှားက အမှိုက် ကုန်သေတ္တာငါးလုံးကို အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်
အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက အမှိုက်ကုန်သေတ္တာငါးလုံးကို အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ ဆောင်ခဲ့ပြီး အမှိုက်ပုံအဖြစ်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများ ကပြောကြားရာ အင်ဒိုနီးရှားသည် အမှိုက်များကို မူလနိုင်ငံများသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်သော နောက် ဆုံး အာဆီယံနိုင်ငံဖြစ်လာသည်။
ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကို အီးယူတိုက်တွန်း
လတ်တလောအတွင်း သမ္မတ၊ လွှတ်တော်နှင့် အုပ်ချုပ် ရေးမှူး ရွေးကောက်ပွဲများတွင် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက် များ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိပြီးနောက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစနစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ အရေးတကြီးစဉ်းစားရန် ဥရောပသမဂ္ဂ ရွေး ကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာ သူများက နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
သာသနာတော်ညှိုးနွမ်းနေ၍ သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေး ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ၀န်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၀ိနည်း သိက္ခာနှင့်အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းမရှိသော သင်္ကန်းဝတ်အရေ ခြုံများ၏ ပြုမူဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် သာသနာတော်ညှိုးနွမ်းနေ၍ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့် ဆင့်၊ အစိုးရနှင့်ပြည်သူများက သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေးကို တက်ညီလက်ညီဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက ယမန်နေ့၌ ထုတ်ပြန်သည်။
ကင်ညာနှင့် ဆိုမာလီယာ၌ စစ်သွေးကြွများ လက်ချက်ကြောင့် လူ ၁၆ ဦး သေဆုံး
ဇွန်လ ၁၅ ရက်က ဆိုမာ လီယာစစ်သွေးကြွများသည် ဆို မာလီယာနှင့် ကင်ညာနိုင်ငံကြား နယ်စပ်အနီးတွင် လမ်းဘေးဗုံး တစ်လုံးနှင့်အတူ ကင်ညာရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်ရှစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
ဟောင်ကောင်ခေါင်းဆောင် ကယ်ရီလမ်း ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပေးရန် ဆန္ဒပြပြည်သူများ တောင်းဆို
ဆယ်စုနှစ်များ အတွင်း အဆိုးဆုံးအကြမ်းဖက် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွားစေသော ရာဇဝတ်သားများ လွှဲပြောင်းရေး ဥပဒေကြမ်းကို ဆိုင်းငံ့ပြီး နောက်တစ်ရက် ဇွန်လ ၁၆ ရက်က ဟောင်ကောင်မြို့လယ်၌ ထောင် နှင့်ချီသော ဆန္ဒပြသူများက အနက်ရောင်အင်္ကျီများ ဝတ်ဆင်ကာ ခေါင်းဆောင် မစ္စစ်ကယ်ရီလမ်း ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အစားအသောက်များ တည်ခင်းသည့်အမှုအတွင်း အမှားလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ညာဟု၏ဇနီး ဝန်ခံ
အစ္စရေးဝန်ကြီး ချုပ် နေတန်ညာဟု၏ဇနီး ဆာရာ က ထောင်ဒဏ် မချမှတ်ရန် သဘောတူညီချက် တစ်ရပ်ဖြင့် ထွက်ဆိုရာတွင် အစားအသောက်များ တည်ခင်းရေးမှာယူရန် အစိုးရ ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစွဲခဲ့ခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ရာဇဝတ်မှုဆိုင် ရာ အမှားလုပ်မိကြောင်း တနင်္ဂနွေနေ့က တရားရုံး၌ ထွက်ဆိုခဲ့ သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရသော သားအမိသုံးဦးကို ပြန်ကယ်တင်နိုင်
ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါ အ၀င် တရုတ်နိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်၍ မိသားစုလိုက် လူကုန်ကူးခံရသော ကွတ်ခိုင်မြို့ခံသားအမိသုံးဦးအမှု ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး နောက် ဇွန်လ ၁၄ ရက်တွင် တ ရုတ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။
လမ်းဦးစီးဌာန ၀န်ထမ်း ၁၇ ဦး မှိုစားပြီး အစာအဆိပ်သင့်
ချင်းပြည်နယ် တွန်းဇံ မြို့နယ်တွင် လမ်းဖောက်လုပ် ရေးတာဝန်ကျနေသည့် လမ်းဦးစီး ဌာန၀န်ထမ်း ၁၇ ဦးသည် မှိုစားမိ ရာမှ အစာအဆိပ်သင့်ပြီး ဆေး ရုံသို့ တက်ရောက်ကုသခဲ့ရသည်။
မန္တလေးမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် အကြီးစားစီမံကိန်းများနှင့် ဒေသခံတို့အကြား ဖြစ်နေသည့်ပြဿနာရပ်များကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် မန္တလေးမြို့ရှိ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက ဇွန်လ ၁၆ ရက်တွင် ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကွန်ရက်ပေါ်ရှိ မြန်မာစာစနစ်ကို ယူနီကုတ်စနစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် ဆွေးနွေး
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကွန်ရက် ပေါ်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ် မြန်မာစာစနစ် ကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်ကစ၍ ယူနီကုတ်မြန်မာစာဖြင့် ပြောင်း လဲအသုံးပြုရန် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးဆွေကပြောသည်။
သမ္မတနှင့် ဇနီးက ခင်ဦးမြို့နယ်ရှိ သောက်သုံးရေ ရှားပါးသော ကျေးရွာတွင် ရေတွင်း၊ ရေကန်လှူဒါန်း
ခင်ဦးမြို့နယ်၌ သောက်သုံးရေရှားပါးသော ရွှေလူးအိုင်ကျေးရွာတွင် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဇနီးက ရေတွင်းနှင့် ရေကန်လှူဒါန်းကြောင်း ခင်ဦးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဝင်းအောင်က ပြောသည်။ ခင်ဦးမြို့နှင့် ၂၃ မိုင်ခန့်အ ကွာ ရွှေလူးအိုင်ကျေးရွာရှိ သာသနာ့နယူပဒေသ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတိုက်အတွင်း ရေတွင်းနှင့် ရေကန်ကို သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၏ ဇနီးက ဇွန်လ ၁၅ ရက် နံနက်က ရေစက်ချလှူဒါန်းခဲ့သည်။